Ama-Hungry Earth Productions Asebenzisa Imikhiqizo Yomklamo weBlackmagic At Holy Ghost festival - I-NAB Show News ngu-Broadcast Beat, Umsakazi Osemthethweni we-NAB Show - NAB Show LIVE
Ikhaya » Okufakiwe » Izindwangu Zomhlaba Ezilambile Zisebenzise Imikhiqizo Yokwakheka kweBlackmagic At Holy Ghost festival
Izindwangu Zomhlaba Ezilambile Zisebenzise Imikhiqizo Yokwakheka kweBlackmagic At Holy Ghost festival
Lapho umcabango womkhosi usuqaliwe, khona-ke inhlansi yokuqamba ngokuqinisekile ifakwa kahle ekwenzeni lokho okufanele kube yinto ephihlizayo, njengoba kusho uBrits. Umkhosi weManchester, e-United Kingdom Holy Ghost wenze lokho kanye kulo nyaka njengoba wawubhokile kancane kwe-blackmagic, noma I-Blackmagic Design ukucaca ngokwengeziwe. I-Blackmagic Design yinkampani yedijithali yedijithali kanye nomenzi wayo onguchwepheshe ekwakheni imikhiqizo ephezulu kakhulu yemikhiqizo yevidiyo evela ku:
Amakhamera wefilimu weDijithali
Izishintshi zokukhiqiza ezibukhoma
Zonke izikena zefilimu
Yonke le mikhiqizo nomsebenzi owengeziwe wokusebenzela ukuthunyelwa okuyinkampani okuyisisekelo ekunikezeni ifilimu yesici, ukukhiqiza okuthunyelwe kanye nezimboni zezokusakaza zethelevishini imikhiqizo engcono kakhulu yekhwalithi yevidiyo emakethe. I-Blackmagic DesignUmqondo oyisisekelo ukusiza ukusiza ukuqhakaza kuqhakaze. Uma kunecala elilodwa elingenzelwa I-Blackmagic Design, bese kuba ukuthi njengabaqambi abaphambili bomhlaba nabakhiqizi bobuchwepheshe bevidiyo bokuqamba, akukaze kufushane ukusebenzisa inani elithile lokuqamba. Le ndlela efanayo yokusungula ikhonjiswe ngoSepthemba 2, 2019 ngaleso sikhathi UMkhosi Oyingcwele.
Umkhosi oyi-Holy Ghost festival wawubanjelwe e ILondon ExCel lapho amaKristu angaphezu kwe-30,000 ahlangana khona obekungangabazeki ukuthi kwakubusuku bokudumiswa nokukhulekelwa okukhulu. Umcimbi we-Fol uvumele abantu abaningi ukuthi bangahlangani kuphela ekukhulekeleni kwabo ngokomoya, kodwa futhi busebenza njengombukiso ekwambuleni I-Blackmagic Designukusebenza kwe-camera eminingi yekhamera enamakhamera amaningi, okubandakanya I-URSA Broadcast futhi URSA Mini Pro G2.
Izindwangu Zomhlaba Ezilambile Futhi I-Blackmagic Design Imikhiqizo Liveened Up The Holy Ghost festival
Sibonga u Izindlala Zomhlaba Ezilambile, i-Holy Ghost Festival ifakazele ubusuku obumangalisayo hhayi nje kumaKhristu amaningi ahambayo, kepha kwaba yisibonakaliso esihle sokuzinikela kweBlack Magic Design kuzo zombili ikhwalithi nokuqina imikhiqizo yayo eyaziwa ngayo. Ukusakazwa kwe-URSA ne-URSA Mini Pro G2 kubonakale kungafani nalokhu njengoba bekusetshenziselwa ukuthola okuqukethwe kokuqagelwa kwesikrini esikhulu nokusakazwa bukhoma.
I-URSA Broadcast ngamakhamera amabili kweyodwa, kanye nekhamera enhle kakhulu ye-ENG nomsebenzi wohlelo, kanye nekhamera yesitudiyo sochwepheshe. Abasakazi bendabuko bazothola i-URSA Broadcast kokubili engabizi futhi iguquguqukayo njengoba isebenzisa ama-lens namabhethri, ngenkathi kususwa isidingo samakhadi wemidiya namafomethi efayela atholakala kumakhamera wendabuko amaningi. Le khamera futhi ingarekhoda kumakhadi we-SD ejwayelekile ngenkathi isebenzisa amafomethi afanayo afanayo atholakala ezinhlelweni zokuphatha imidiya nokusabalalisa okuningi kwe-NLE software. I-URSA Broadcast isiza nabasakazi bewebhu ngoba ingasebenza nobabili abadala emakethe HD ama-lens nama-lens weshibhile ashibhile.
I-URSA Mini Pro G2 iyikhamera yefilimu eyidijithali esebenza ngobuciko ikhwalithi yesithombe ye-4.6K emangalisayo ngezimpawu nezilawuli zekhamera yokusakaza yendabuko! Le khamera yesizukulwane sesibili futhi ifaka i-elektroniki kabusha ehlelwe kabusha kanye ne-Super entsha 35mm 4.6K Isithombe se-HDR inzwa ehlanganisa ukunika umsebenzisi ukuphakeme kakhulu Ukukalwa kwe fulemu ukudubula.
Umkhiqizi kanye noMqondisi: AmaHyry Earth Productions
Ukuchwephesha kwezobuchwepheshe kwale mikhiqizo kwagcizelelwa futhi Umkhiqizi weHungry Earth / umqondisi uJerry Curd ngubani owakusho lokho "Umqondo wami wokuqala bekuwukusebenzisa insimu engajulile ye-URSA Mini G2 ukufezekisa ukumbozwa kwe-URSA, futhi ukuthi umbono uyakhokha impela. Umdlalo ubungahlukeki, futhi ngenxa yolawulo olufanayo lwenqubo kanye nenqubomgomo ye-SDI yeBlackmagic yokulawula amakhamera, sikwazile ukukhipha wonke amakhamera esebenzisa i-hardware efanayo. "
Ngaphezu kokusebenzisa i-URSA Broadcast ne-URSA Mini Pro G2, uJerry ukhulume ngokusetshenziswa kwe-a Ikhamera yesithupha yeCinema Camera 4K, ebiyengezwe kulo mboniso njengoba isho lokho "Besingakaze sicabange ngaphambili ukusebenzisa le khamera," "Kepha isisindo sayo nesimo sayo kusenze sacabanga ukuthi kungenzeka ukuthi ilungele ukuqina noma ukuphathwa ngesandla esiteji. Sisebenzisa uhlelo olungenantambo lweCosmo ne-Hollyland extender kukhamera yethu ejwayelekile yokuhamba ngesiteji, ngakho-ke sathatha ikhamera yePocket's I-HDMI umphumela walokho. ”
Ngaphandle kokusebenzisa kahle I-Blackmagic Designimikhiqizo, efaka eyabo Umethuli WeWebhu ne-software mimolive, i-Hungry Earth Productions iphinde yanikela ngethimba le-FOL elingaphakathi endlini nge-feed ye-SDI eshumekiwe yomsindo, ebisebenza ukusiza ukusakaza umcimbi kuzinkulungwane zababukeli emhlabeni wonke. I-SFL Group isingathe yonke indawo ye-AV kanye nokuqagela, okuyiCurd ngenxa yalokho iqembu labo elisebenzisa I-ATEM Television Studio Pro 4K ukuxubana kombono. Uqhubekele phambili nokusho ukuthi i-SFL ithathe kanjani okuphakelayo kwe-1080p50 ngaphezulu kwe-3G-SDI, kanye namakhompyutha ayisithupha anengoma yehubo, i-VT playout, iwashi lesikhathi sezipikha, neminye imidwebo ehlukahlukene yokuqagela kanye nokudlulisela kwizikrini eziseduze kwendawo.
Ngokudumisa okuphezulu nokuvela kwensimbi, azikho izinto ezimangazayo okufanele zivele ekucabangeni kwezobuchwepheshe kwe I-Blackmagic Design nomsebenzi wabo ophambili wokusiza umkhiqizo wokukhiqiza kanye nomkhakha wethelevishini ukuba ube imboni yokudala ngempela.
Ukuthola Imininingwane Ngaphezulu I-Blackmagic Design nemikhiqizo yayo emangalisayo yevidiyo, bese ubheka: www.blackmagicdesign.com/company/aboutus.
2015 I-ATEM Television Studio Pro 4K ukuncipha kwe-bitrate I-Blackmagic Design Injini yokusakaza Ukusakaza Ubuchwepheshe CES2017 AmaKristu I-Cobalt Encoder I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor H264 / H265 HDR I-HDR / i-WCG HEVC HEVC / AVC UMkhosi Oyingcwele Izindlala Zomhlaba Ezilambile Immersive i-isovideo I-JCT-VC UJerry Curd I-MStar ukunciphisa komsindo I-Pocket Cinema Ikhamera 4K ukukhiqizwa kokuthunyelwe SoftAtHome Ama-spears nama-Arrows Ubuchwepheshe be-TV I-TVU Izinethiwekhi UHD / 4K / HD I-URSA Broadcast URSA Mini Pro G2 i-viarte Umlingisi wevidiyo Warsaw	2019-09-04
Ngaphambilini: I-Dejero Iveza i-EnGo 260 entsha eyakhiwe nge-Emmy Award Winning Technology e-IBC
Olandelayo: I-Alchemy Post Sound ihambisa i-Foley eyenziwe ngobuchule ngesandla ye-Indie Dramedy ewina umklomelo "The Climb"